समाचार - कसरी मेशिन प्रक्रियामा विमान थ्रेडहरू परिवर्तन गर्ने?
प्लेन थ्रेडलाई अन्तिम थ्रेड पनि भनिन्छ, र यसको दाँतको आकार आयताकार धागो जस्तै छ, तर समतल थ्रेड सामान्यतया सिलिन्डर वा डिस्कको अन्त्य अनुहारमा प्रशोधन गरिएको थ्रेड हो। वर्कपीसको सापेक्ष मोड्ने उपकरणको ट्र्याजेक्ट्री जब एउटा प्लेन थ्रेड मेशिन गर्दै छ भने अर्किमिडीज स्पायरल हो, जुन सामान्य रूपमा घुमाइएको बेलनाकार धागा भन्दा फरक हुन्छ। यसको लागि वर्कपीसको एक क्रान्ति चाहिन्छ, र बीचको गाडीले पिचलाई वर्कपीसमा पछि सार्दछ। तल हामी विशेष रूपमा कसरी प्लेनमा थ्रेडहरू परिवर्तन गर्ने भनेर परिचय दिनेछौं मेशिन प्रक्रिया।
१. थ्रेडको आधारभूत विशेषताहरू
थ्रेडेड जोड्ने दुबै बाह्य र आन्तरिक थ्रेडको साथ, मशीनिंगको समयमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। थ्रेड प्रोफाइलको आकारका अनुसार त्यहाँ चार मुख्य प्रकारहरू छन्: त्रिकोणीय थ्रेड, ट्रेपेजोइडल थ्रेड, सेरेटेड थ्रेड र आयताकार धागा। थ्रेडको थ्रेडहरूको संख्या अनुसार: एकल थ्रेड र बहु-थ्रेड थ्रेड। बिभिन्न मेशिनहरूमा, थ्रेडेड पार्ट्सको प्रकार्यहरू मुख्य रूपले निम्न समावेश गर्दछन्: एउटा फास्टनिंग र जडानको लागि हो; अर्को शक्ति प्रसारण र गति को रूप परिवर्तन गर्न को लागी हो। त्रिकोणीय थ्रेडहरू प्राय: कनेक्शन र मजबुतताको लागि प्रयोग गरिन्छ; ट्रैपिजोइडल र आयताकार थ्रेडहरू अक्सर शक्ति प्रसारित गर्न र गतिको रूप परिवर्तन गर्न प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूको प्राविधिक आवश्यकताहरू र प्रसंस्करण विधिहरूको निश्चित भिन्नता उनीहरूको विभिन्न प्रयोगको कारण छ।
२. प्लेन थ्रेड प्रोसेसिंग विधि
साधारण मेसिन उपकरणहरूको प्रयोगको साथसाथै, मेशिन थ्रेडको प्रशोधन कठिनाईलाई प्रभावी ढंगले कम गर्न, कार्य दक्षता सुधार, र थ्रेड प्रशोधनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, सीएनसी मेशिन अक्सर प्रयोग गरिन्छ।
G32, G92 र G76 का तीन आदेशहरू सामान्यतया CNC मेशिन उपकरणहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ।
आदेश जी 32: यसले एकल स्ट्रोक थ्रेड प्रशोधन गर्न सक्छ, एकल प्रोग्रामिंग कार्य भारी छ, र कार्यक्रम अधिक जटिल छ;
कमाण्ड G92: एक सरल धागो काट्ने चक्रलाई महसूस गर्न सकिन्छ, जुन प्रोग्राम सम्पादनलाई सरलीकृत गर्नका लागि सहयोगी हो, तर वर्कपीस खाली पहिले नै रउग गर्नु पर्छ।
कमाण्ड G76:: कमाण्ड G92 को कमजोरीहरूलाई पार गर्दै, workpiece खालीबाट समाप्त धागामा एक पटकमा एक पटकमा मिसिन सकिन्छ। प्रोग्रामिंगको समय बचत गर्नु भनेको कार्यक्रमलाई सरलीकृत गर्नको लागि ठूलो मद्दत हो।
G32 र G92 सीधा काट्ने विधिहरू छन्, र दुई काट्ने किनाराहरू सजिनो गर्न सजिलो छ। यो मुख्यतया ब्लेडको दुई किनाराहरूको एकसाथ कामको कारण, ठूलो काट्ने बल र काटनेमा कठिनाईको कारणले हो। जब ठूलो पिच भएको धागो काटिएको छ, ठूलो काटनेको गहिराईको कारण काटनेको धार चाँडो पहिरिन्छ, जसले थ्रेडको व्यासमा त्रुटि उत्पन्न गर्दछ; जे होस्, प्रक्रिया गरिएको दाँत आकारको शुद्धता उच्च छ, त्यसैले यो सामान्यतया सानो पिच थ्रेड प्रशोधनको लागि प्रयोग हुन्छ। किनभने उपकरण आन्दोलन काटने प्रोग्रामिंग द्वारा पूरा भयो, मशीनिंग प्रोग्राम लामो छ, तर यो लचिलो छ।
G76 the काli्ग काट्ने विधिसँग सम्बन्धित छ। किनकि यो एकतर्फी कटौती प्रक्रिया हो, दायाँ काट्ने किनारा सजिलैसँग बिग्रन र लगाउन सकिन्छ, ताकि मसिनको थ्रेडेड सतह सीधा हुँदैन। थप रूपमा, एक पटक काटनेको किनारा कोण परिवर्तन भए पछि दाँतको आकारको शुद्धता कमजोर छ। जे होस्, यस मसि method विधिको फाइदा भनेको काट्ने गहिराई कम हुँदैछ, उपकरण लोड सानो छ, र चिप हटाउन सजिलो छ। त्यसकारण, प्रशोधन विधि ठूलो पिच थ्रेडहरूको प्रशोधनको लागि उपयुक्त छ।